Xildhibaan Jawaari: Madaxweynuhu ma xakumo Baarlamaanka iyo Garsoorka! – Kalfadhi
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Sh. Cusmaan Jawaari, ayaa ku tilmaamay halis iyo baaba’ dowladnimo in ay awoodda Soomaaliya hal gacan gasho. Isaga oo la hadlayey Axsaabta Siyaasadda ee curdanka ku ah Soomaaliya ayuu sheegay inuusan midkood markuu talada qabto sameyn waxa uu hadda ka cabanayo ee ah in ay dowladdu caburineyso, oo ay awooddii iyo taladii marooqsaneyso.
“Ha leyska ilaaliyo, oo yaan la horseedin, in saddexdaas awoodood (Baarlamaanka, Fullinta iyo Garsoorka) ay hal gacan ku aruurto” ayuu yiri Xildhibaan Jawaari, isaga oo qatar ku tilmaamay in ay xukuumaddu liiddo saameynta iyo waxgalnimada Axsaabta Siyaasadda ee mucaaradka ah. “Dhibaatada ugu weyn weeyaan taas” ayuu yiri Jawaari.
Waxa uu sheegay in marka ay dowladdu dalka hogaamineyso, oo ay axsaabtuna dibadda joogaan, aysan taas macnaheedu ahayn in aan la dhageysanin axsaabta. Waxa uu aad u amaanay dimuqaraadiyadda Soomaaliya, “marka loo fiiriyo” buu yiri “dalalka Carabta”, kuwaas oo uu sheegay in ay yiraahdaan “ma sameyn karno waxa ay Soomaaliya sameyso”.
“Madaxweynuhu ma xukumo (Sharci-dejinta iyo Garsoorka)” ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Sh. Cusmaan Jawaari. “Kuligood waa siman yihiin” ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa uu ku celceliyey, isagoo isku dayaya inuu muujiyo halista ay u leedahay dowladnimada, iney muhiim tahay in la fahmo ineysan sax ahayn inuu Madaxweynuhu xakumo laamaha kale ee dowladda (Sharci-dejinta iyo Garsoorka).
“Hala ilaaliyo in ay saddexaas awoodood mar walba kala madax-banaanaadaan, oo aysan tartaminee ay is-buuxiyaan” ayuu yiri Jawaari. Waxa uu booriyey wada-shaqeynta iyo ka xuroobidda ka dhex raadinta qaranka dan gaar ahaaneyd. Waxa uu carrabka ku adkeeyey iney muhiim tahay in la garto sida ay qaranka wax-gal ugu tahay midnimada.